News - CCTV သတင်းများအရအားသွင်းပုံသည်အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးသစ် ၇ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
CCTV သတင်းကအားသွင်းပုံသည်အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးသစ် ၇ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
စိတ္တဇ။ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တွင်“ အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုအသစ်ကိုစတင်ရန်အချိန်ကောင်း” ဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းကစျေးကွက်ရှိ“ အခြေခံအဆောက်အအုံအသစ်” အပေါ်ကျယ်ပြန့်သောအာရုံစိုက်မှုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် CCTV သတင်းကအားသွင်းပုံသည်အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးသစ် ၇ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံအသစ်များသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ 5g base station ဆောက်လုပ်ရေး၊ UHV၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှင့်အဝေးပြေးရထားလမ်းများ၊ စွမ်းအင်သုံးမော်တော်ယာဉ်အားသွင်းပုံ၊ ကြီးမားသောဒေတာစင်တာ၊ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်၏စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းမှုအခြေခံအဆောက်အအုံအနေဖြင့်ပုံကိုအားသွင်းရန်အရေးကြီးပုံကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။
စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကြီးမားသောမော်တော်ယာဉ်နိုင်ငံတစ်ခုမှအင်အားကြီးသောမော်တော်ယာဉ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ charging အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ဤမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ခိုင်မာသောအာမခံချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိတရုတ်နိုင်ငံတွင်အားသွင်းတိုင်စုစုပေါင်း ၆၆၀၀၀ မှ ၁၂၁၉၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးစွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်များလည်းအလားတူကာလတွင် ၄၂၀၀၀၀ မှ ၃.၈၁ သန်းသို့တိုးလာကာသက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ပုံအချိုးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၆.၄ မှ ၁ အထိကျဆင်းသွားသည်။ ၃.၁: ၁.၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်၊ အားသွင်းစက်များတိုးတက်လာခဲ့သည်။
စက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသောစွမ်းအင်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၂၁ မှ ၂၀၃၅) မူကြမ်းအရ ၂၀၃၀ တွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စွမ်းအင်ယာဉ်အသစ်အရေအတွက် ၆၄.၂ သန်းအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးရည်မှန်းချက်အရ လာမည့်ဆယ်နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်အားသွင်းပုံဆောက်လုပ်ခြင်းတွင် ၁ ဒသမ ၁ တန်သောမော်တော်ယာဉ်ပုံအချိုးမှာ ၆၃ သန်းကွာဟချက်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပုံအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးစျေးကွက်အားသွင်းရန်ယွမ် ၁.၀၂ ထရီလီယံခန့်ရှိသည်။
ဒီအဆုံးမှာတော့manyရာမအစုအမြောက်အများသည်ပုံသွင်းရန်လယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးအနာဂတ်တွင်“ အမဲလိုက်ခြင်း” လုပ်ဆောင်မှုသည်ဘက်စုံလုပ်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ “ ပိုက်ဆံအမြင်” အတွက်တိုက်ပွဲတွင် ZLG သည်ကားအားသွင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
1. AC ပုံ
charging power သည် 40kW ထက်နည်းပါက charging pile ၏ AC output ကို DC DC သို့ပြောင်းလဲပြီးယာဉ် charger မှတစ်ဆင့် on-board battery ကိုအားသွင်းသည်။ ပါဝါသေးငယ်ပြီးအားသွင်းမြန်နှုန်းနှေးသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ရပ်ကွက်၏သီးသန့်ရပ်နားရန်နေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိအခြေအနေအများစုမှာလိပ်ခေါင်းပို့ရန်ယာဉ်များကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပြီး၊ ပုံတစ်ပုံလုံး၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်မှာအတော်အတန်တင်းကြပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် AC pile အားအားသွင်းပုံနှေးသောကြောင့်နှေးကွေးသောပုံဟုခေါ်သည်။
သာမာန် DC pile ၏အားသွင်းနိုင်စွမ်းသည် 40 ~ 200kW ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ တွင် overcharge standard ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး 950kw အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အားသွင်းပုံမှတိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုသည်ကားဘက်ထရီကိုတိုက်ရိုက်အားသွင်းပြီးပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်မြန်သောအားသွင်းမြန်နှုန်းရှိသည်။ ၎င်းကိုဗဟိုအမြန်နှုန်းနှင့် charging station များကဲ့သို့သောဗဟိုအားသွင်းသည့်နေရာများတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏သဘောသဘာ ၀ မှာခိုင်မာပြီးရေရှည်အမြတ်အစွန်းလိုအပ်သည်။ DC pile သည်စွမ်းအားမြင့်ပြီးလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်အပြင်မြန်သောအားသွင်းပုံကိုလည်းခေါ်သည်။
၃။ ZLG သည်သင့်လျော်သော charging point ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Guangzhou Ligong Technology Co. , Ltd. သည်စက်မှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်သုံးအီလက်ထရောနစ်အသုံးပြုသူများအတွက်ချစ်ပ်နှင့်ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသော IOT ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ရွေးချယ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမှအစုလိုက်အထိ ထုတ်လုပ်မှုနှိမ်နင်းခြင်း။ အခြေခံအဆောက်အအုံအသစ် Zhabeu, ZLG သည်သင့်လျော်သော charging pile solution ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
AC pile သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးပြီးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပြီးအဓိကအားဖြင့် charging control unit၊ charger နှင့် communication unit တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ လက်ရှိစတော့ရှယ်ယာနှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကားစက်ရုံမှထောက်ပံ့သည့်ကားများဝယ်ခြင်းမှဖြစ်သည်။ အားသွင်းပုံတစ်ခုလုံး၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ၊ မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်အားသွင်းပုံလုပ်ငန်း၏အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
AC pile သည်အခြေခံအားဖြင့် ARM Architecture MCU ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ZLG သည် power supply၊ MCU၊ ဆက်သွယ်ရေး module ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
2. DC ကပုံ
DC pile (လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သောပုံ) စနစ်သည်အတော်အတန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ပြည်နယ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းယူနစ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီကြီးများသည်စျေးကွက်ကိုသိမ်းယူရန်နှင့်နယ်မြေအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံ။
ZLG သည် core board၊ MCU၊ ဆက်သွယ်ရေး module၊ standard device နှင့်အခြားအခွင့်အလမ်းများကိုပေးနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီကြီးများကိုလိုက်လံရှာဖွေနေစဉ်တွင်အားသွင်းပုံလုပ်ငန်းသည်အပြောင်းအလဲများစွာကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ အားသွင်းတိုင်အရေအတွက်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးပုံစံများသည်ထပ်တူကျလိမ့်မည်၊ အင်တာနက်ဒြပ်စင်များကိုပေါင်းစပ်သွားလိမ့်မည်။
သို့ရာတွင်စျေးကွက်ကိုသိမ်းယူရန်နှင့်နယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီကြီးများသည်“ ခွဲဝေမှု” နှင့်“ ပွင့်လင်းခြင်း” အယူအဆမပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ဒေတာအချင်းချင်းဝေမျှဖို့ခက်တယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအက်ပလီကေးရှင်းများအကြားအားသွင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ကုမ္မဏီမှမဆိုအားသွင်းတိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်။ မရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာစားသုံးသူလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခက်ခဲသောအားသွင်းတိုင်များအကြားတူညီသောစံသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ ကားပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် charging အတွေ့အကြုံကိုအလွယ်တကူခံစားနိုင်ရုံသာမကအရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပုံကုမ္ပဏီကြီးများ၏အချိန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပါမြင့်တက်စေသည့်စုစည်းထားသောစံနှုန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲရန်ခက်ခဲသည်။
ထို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အနာဂတ်အောင်မြင်မှု (သို့) အားသွင်းပုံလုပ်ငန်း၏ပျက်ကွက်မှုအားစုစည်းထားသည့်စံအတိုင်းအတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။